Qaar Kooxda Jwxo-shiil ah oo Nairobi Lagu Xidhxidhay – Rasaasa News
Qaar Kooxda Jwxo-shiil ah oo Nairobi Lagu Xidhxidhay
Feb 21, 2010 cali cadhoole, Jwxo-shiil
“Geel jire ritiga baadida ah ruuga ka uleeye, Nin shisheeye raacoo dhanbaa qaba rafaad kaase, Waxa aniga layriixayaa reer kalaad tahay, War Haaruun Maxaa,daar maxaa looga tagay sow tol jira ma,aha.”
War naga soo gaadhaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaa sheegaya in lagu xadhay xubno ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, maalintii shalay ahayd Nairobi.
Waxaa todobaadadanba uu xikhilaaf iyo dagaal dhexyaalay Jaliyada kooxda Jwxo-shiil, dagaalkaas oo salka ku haya dagaal beeleed. Wakiilka Jwxo-shiil ee Kenya Cali dheer [Cadhoole], ayaa waxaa uu si dhab ah dagaal ugula jiraa beesha Jwxo-shiil u haysata dilkii Dr M S Dolal, oo uu kal hore si beel ah ugu dilay gudaha dhulka Somalida Ogadeeniya.
Jwxo-shiil, ayaa waxaa uu baryihii ugu dambeeyey oo dhan ku jiray dagaal beel, kana leexday wixii ay ummadu u dhiibatay muddo 12 sano ah.
Dagaalkan kooxda Jwxo-shiil ee Nairobi, ayaa waxaa uu salka ku hayaa xubno yar oo ka hadhay beeshooda walina aaminsan in uu Jwxo-shiil uuhalgan ku jiro, ayaa waxaa lagu hayaa takoor iyo ciil uu Jwxo-shiil u qabo beeshooda.
Cali Dheer ayaa bishii hore si amar ku taaglayn ah xilkii uu hayey Ina Shafeec ugu wareejiyey Xaamud oo isagu ah nin Ciise ah, kaas oo uu Cali dheer filayo in uu u shaqayndoono beesha xilka u dhiibata Madaama ay beeshiisu nabad galiyo kula joogto xukuumada Itobiya.
Arintan xil ka qaadida ah ayuu diiday Ina Shafeec, waase la muquuniyey. Hadaba Ina Shafeec oo hore eed uga galay beeshiisa oo aan dhex gali karin ayaa diiday in uu cidlo istaago, waxaana uu dagaal kala horyimid Cali dheere iyo Xaamud.
Hadaba, sida ay wararku sheegayaan waxaa halkaasi ka dhacay gacan ka hadal, ka dibna waxaa xabsiga loo taxaabay afar ruux, waxaa kale quful korka laga saaray xafiiskii ay isku haysteen, waxaana ku socota baadhis.
Waxa laga cabsi qabaa in arintu ay noqoto mid siyaasad cagaha la gasha, taas oo keenidoonta in Kenya ay soo gasho liistada meelaha laga qabqabto dadka Somalida Ogadeeniya, Kenya oo ah meelaha ugu badan yihiin.
Cali Dheere [Cadhoole] oo laba todobaad ka hore ku xabadeeyey Nuur Faatule degmada Dhoobley, ayaa waxaa uu wadaa olole amar ku taaglayn ah.
Dhanka kale Hanad Maalin Guur oo Jooga Maraykanka ayaa waxaa uu todobaadkii hore damcay in xubin Jwxo-shiilo, oo kooxda xil u hayey in uu ka qaado xilka una dhiibo xubin kale. Xubinkii Jwxo-shiilada ayaa Hanad ku yidhi adigu xil igama qaadi kartid Jwxo-shiil, baana xilka ii dhiibay isaga umbaana iga qaadi kara.
Dhibaatooyinka Jwxo-shiilo, ay wadaan ayaa ah muujin beel, waxayna doonayaan in ay ka muuqato maxfalada beelaha Somalida Ogadeeniya, tirtiraana meeshii ay awal hore kaga jir jirtay beelaha Somalida Ogadeeniya.
FG. Tuducda gabayga ah ee kore waxaa tiriyey Shariif-laato Raximahalahu, oo caan ka ahaa dhulka Somalida Ogadeeniya oo ka mid ahaa gudoomiyaashii dagmooyinka.
Shariifku wuxuu tiriyay gabaygan isaga oo ka eed sheeganaya maa mulkii la odhan jiray ogaden/rasgaz ee ay Goday xarunta u ahayd. Xili laga qadiyey qaybintii gudoomiyeyaasha gabalada, sida gabayga ka muuqata Haaruun kama qayb gali jirin qaybsiga maamulka dhulka Somalida Ogadeeniya. Waa midaas arinta uu Jwxo-shiil maanta ka dagaalamayo ee wax kale ma aha.
Shir Balaadhan oo Beesha Absame Uga Furmay dalka South Africa